အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြို့၌ မြန်မာသံရုံးနှင့် အာဆီယံဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ရုံးတို့ စုပေါင်းပြုလုပ်သည့် (၇၂)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း – Ministry of Foreign Affairs
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြို့၌ မြန်မာသံရုံးနှင့် အာဆီယံဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ရုံးတို့ စုပေါင်းပြုလုပ်သည့် (၇၂)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း
(၁၅-၁-၂၀၂၀ ရက်၊ ဂျကာတာမြို့)
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြို့၌ မြန်မာသံရုံးနှင့် အာဆီယံဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရုံးတို့ စုပေါင်းပြုလုပ်သည့် (၇၂) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၆) ရက် ညနေ (၁၉၀၀) နာရီမှ (၂၁၀၀) နာရီအထိ ဂျကာတာမြို့၊ Hotel Borobudur Jakarta ရှိ Flores Ballroom တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီး H.E. Mr. Yasonna H. Laoly မှ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအစိုးရ၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး၊ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. Dato Paduka Lim Jock Hoi ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံရေးရာ၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးရာ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Lutfi Rauf၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် စီးပွားရေးဆန်းသစ်တီထွင်မှုရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး Mrs. Rizki Handayani ၊ ဂျကာတာမြို့၊ တိုင်းဒေသလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Sultan Baktiar Najamuddin ၊ ဂျကာတာအထူးဒေသ ခရီးသွားလာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုရေးရာ ဒုတိယမြို့တော်ဝန် Mr. Dadang Solihin ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သံတမန်ရေးရာနှင့် ကောင်စစ်ရေးရာဉီးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် H.E. Mr. Andri Hadi၊ အာရှပစိဖိတ်နှင့် အာဖရိကရေးရာဆိုင်ရာဉီးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Desra Percaya ၊ အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများမှ အရာရှိကြီးများနှင့် အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် သံအမတ်ကြီးများ၊ ဂျကာတာမြို့ အခြေစိုက် သံရုံး၊ အဖွဲ့ရုံးများမှ သံရုံးအကြီးအကဲများနှင့် သံတမန်များ၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူးနှင့် ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများမှ အကြီးအကဲများ၊ စစ်သံမှူးများ၊ အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြန်မာမိသားစုများ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပညာတော်သင် ကျောင်းသား/ သူများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ဖိတ်ကြားထားသူများ စုစုပေါင်း ဧည့်ပရိသတ် (၄၀၀) ကျော် စုံညီစွာ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ရုပ်သေးအကဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့အလှ ရှုခင်း Video presentation များဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြန်မာအစားအစာများဖြစ်သည့် အုန်းထမင်း၊ အမဲသားဟင်း၊ ဘာလချောင်ကြော်တို့ဖြင့်လည်းကောင်း ထည့်သွင်းကျွေးမွေး ဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။